Maalinta: Noofambar 8, 2017
Magaalada Tokyo, socdaalka mootooyinka waa la yaabay
Magaalada Japan ee 38 milyan ee ku taal Tokyo ayaa ka mid ah magaalooyinka ugu dadka badan dunida. Rakaabku waxay doorbidaan metrooga sababtoo ah soonkooda iyo waqtigooda imaatinka. Marka ugu horeysa ee aad fiiriso sawirrada waxaad moodaa muuqaal filim oo Tokyo caadi ah [More ...]
Abaalmarinta Abaalmarinta Bulshada ee Steven ee Sanadka IGA
Mashruuca Gegada Diyaaradaha ee Magaalada Istanbul ayaa la guddoonsiiyay abaalmarinnada Ganacsiga Caalamiga ah ee '2017 Stevie', Barnaamijka Mas'uuliyadaha Bulshada ee sanadka, barnaamijka Barnaamijka Maalgashiga Bulshada ee uu ka bilaabay sagaal xaafadood oo u dhaw goobta dhismaha. Gegada Diyaaradaha ee Magaalada Istanbul [More ...]
Maxay noqon doonaan khadka taraamka-tareenka ee magaalada magaalada?
Madaxweyne Alinur Aktaş wuxuu go aansan doonaa mustaqbalka qadka T2 ee u dhexeeya Kent Square iyo Terminal. Khubaradu waxay soo jeediyeen in dib loogu noqdo nidaamka tareenka fudud. QIIMAYNTA XAALADA DEG DEG AH EE Dawlada Hoose ee Magaaladda Caalin [More ...]
Van ayaa si farxad leh u sugaya injiilka taraamka
Silk Road ma aha jidkii si "bir ah" in shabakadaha isku xidhan, tareen-xawaaraha sare in Turkey si adag u xidh ku lifaaqan kasta oo kale, sugaya taraamka Van hammuun siiyey war wanaagsan mar marka injiilka taraamka ee la soo dhaafay in Diyarbakir. Magaalooyinka waaweyn [More ...]
4 waxaa la xiray sanado badan Halkalı- Waa dhammaadka xaafad. Gawaarida waxaa lagu rakibay meelo badan, xarumo ayaa lagu rakibay. October 29 2018 185, kaas oo geli doona adeegga daqiiqo gudahood ilaa laynka Halkalı-Gebze 105 ayaa soo degeysa daqiiqado [More ...]
1 Dhimashada Khatarta ah ee Isu-tagga Tareenka ee ku yaalla Usak
Shilkii ka dhacay Uşak, tareenka wuxuu ku rarnaa gaari xamuul ah oo qaadaya isgoyska heer. Sida laga soo xigtay Alnan macluumaadka, Afyonkarahisar ka soo jeeda Izmir kuna socota jihada ismaamulka Güllüçam ee tuulada isgoyska [More ...]
RayHaber 08.11.2017 Warbixinta Shirka
Gawaarida nooca nooca loo yaqaan "DE 24000" waxaa lagu qalabeyn doonaa nidaamka dib u celinta microprocessor. [More ...]
Manisals waxay go'aamin doonaan midabka basaska deegaanka ah
Dowlada hoose ee Manisa, oo sii wadata dadaalkeeda ku aaddan hirgalinta nidaamyada casriga ah ee gaadiidka magaalada, ayaa weydiinaya midabka basaska korantada u fiican deegaanka Manisal tolar. Manisa deggan, http://www.manisa.bel.tr Adoo kaqeyb galaya sahanka cinwaanka, casaan, jaale, buluug [More ...]
Talaabadii ugu horraysay ayaa laga qaaday mashruuca metro-Istanbul ee Kocaeli
Dawladda Hoose ee Magaalada Kocaeli, ee sii wadaysa hawlihii mashruuca Metro, oo aasaas looga dhigi doono 2018, inta u dhaxaysa Darıca, Gebze iyo OIZs, dhanka kale, iyada oo ay weheliso Dawladda Hoose ee Magaalada Istanbul, Istanbul iyo Kocaeli Metro [More ...]
Duqa magaalada Bursa Alinur Aktaş, xafiisyada dawlada hoose iyo maareeyeyaasha guud ee shirkadda, ayaa la kulmay maareeyayaasha BUSKI. Kulankan ayaa ahaa kii ugu horreeyay ee taariikhda degmada loo sameeyo xafiisyada xafiisyada ku saabsan lacagta, shaqaalaha iyo maamulka mashruuca. [More ...]
Transport, arrimaha badda iyo Wasiirka Isgaarsiinta Ahmet Arslan, xiriirka u dhexeeya Qatar iyo Turkey ayaa sii waday in la kordhiyo meelo badan iyo xoojinta dheeraad ah ee u dhexeeya labada dal, wuxuu sheegay in dawladda iyo dadweynaha. Wasiirka [More ...]
Adeegga Ijaarka Gawaarida waxaa laga qaadi doonaa TC GUUDDUUDAHA KHUDBADKA GOBOLKA TCDD 7. TILMAAMAHA GUUD EE DIIWAANKA TILMAAMAHA TILMAAMAHA TILMAAMAHA 7 Agaasime Goboleed leh darawalka (marka laga reebo kharashaadka shidaalka) [More ...]
Maanta taariikhda: 8 December 1874 Agop Azarian Shirkadda ...
Maanta Taariikh 8 December 1874 Shirkadda Agop Azarian waxay ballan-qaadday in ay joojiso 12 bil gudaheed markii ay rabto inay dhisato line-ka Belova-Sofia.